Pahilo Prem (पहिलो पे्रम) - First Love - Nayan
Pahilo Prem (पहिलो पे्रम) - First Love
कसैले माया गर्छु भन्दैमा माया बस्ने हो त ? होइन पटक्कै होइन । माया त कहिल्यै पनि ख्याल ठट्टा गर्दैमा, कसैले दुई ह्दयलाई जबरजस्ती जोड्दिदैमा बस्दैन । माया भन्नु स्वतन्त्र आकाशमा उडिरहने चरी हो । माया आफै बस्छ, मायाको आफ्नै बाटो हुन्छ । माया त जीवन हो, माया कसैको स्वार्थको शब्द होइन पनि कसैको निजीगत शब्द होइन । माया त एउटा पवित्र शब्द हो जहा“ संसार उभिएको हुन्छ । माया पूजा हो । एक अर्थमा भन्नु पर्दा माया स्पन्दन हो, जीवन चलाइरहेछ । म सोच्छु अन्जी स“ग....... । हु“दैन हु“दैन म कसरी माया गरु, कसरी आफ्नो दिल दिउ“m, कसरी उनीलाई आफ्नो भन्नु । म त कसैलाई एकोरोहो प्रेम गर्छु, इलभ कष्मभ यिखभ । मैले त जबरजस्ती कसैको ह्दय चोरेर छाती भित्र कहिल्यै नखस्ने गरी टा“सिसकेको छु । तिमी नै भन त्यो ह्दयलाई कसरी च्याति फेरि अर्को टा“सु । म सक्तिन, म सक्तिन....धेरै नै मुटु जलाइसकेको छु, बा“की छ त यो खोक्रो प्राण । आफ्ना रसाइ रहेका आ“खा पुछ्दछु । लाग्छ ह्दयमा गहिरो चोट परेको छ । म सोच्छु, म धेरैै बेर सम्म सोचि रहन्छु अनि पागल भनी मनमनै आफुले नै आफुलाई उपमा थपिरहन्छु । एक अर्थमा आफैलाई पागल भनेकोमा ठीक लाग्छ, सहि लाग्छ । म पागल नै हु“ । मलाई कसैले पागल बनाएको हो । म आफै पागल भएको चाहि पटक्कै होइन । माया गर्छु कसैलाई म, धेरै नै माया गर्छु, ह्दयदेखि नै । आफ्नो दुई मुठी श्वास उसको नाममै सुम्पिदिन्छु कसैलाई, कसैलाई जो आजसम्म आ“खा जुधाएर बोलेको छैन । आफू नै हराएको पाउछु कसैमा जो मलाई आज सम्म चिनेको पनि छैन । यो जुनिभर कुरिरहन्छु कसैलाई जो मेरो आ“खामा छा“या बनेर आउछ तर छा“यामा नै सिमित हुन्छ । यी सब पागलपनको असिमा हो ।
अनि फेरि सिनेमाको जसरी अन्जीको तस्वीर आउछ मेरो नयनमा केही मुस्कान अनि अञ्जनाको मिश्रण सहित । म फेरि सोच्न थाल्छु । धेरै–धेरै गहिराईमा पुगेर सोच्न थाल्छु । एकै छिनमा मलाई नै थाहा हुदैन मलाई के भयो भनेर ? म कुन संसारको मानिस कुन संसारमा छु मलाई थाहा छैन, म आफै छक्क पर्छु । मनमनै गुन्छु यदि अन्जी तिमी मेरी उही सपनाकी राजकुमारी भइदिएकी भए । यदि उहि नै भइदिएकी भए । उप्m π धेरै बेर तिम्रो तस्वीर नियाल्छु , धेरै गहिराईमा पुगेर नियाल्छु अनि लाग्छ तिमी दुईको ह्दय उहि छ । तिमी दुई उही नै हौ । तिमी दुईमा केही फरक छैन । तिमी दुई उही हौ । फरक छ त मात्र मात्र तिमी दुईको नाम । तिमी अञ्जि हौ उ मिलिमा । अञ्जी तिमीलाई माया गर्छु म अव । म अब तिमीस “ग मात्र ह्दय साट्छु, तिम्रंो ह्दय मेरो छातिभित्र टास्छु । म तिमीलाई आफ्नो भन्छु । तिमी पनि त मेरो नजरमा एउटी सोझी र असल साथी बनि बसेकी छौं । मिलिमा स“ग त न म बोलेको नै छु न त राम्रोस“ग उसलाई देखेको नै छु । तिमीलाई त म ह्दयबाटै नै चिनिसकेको छु, तिमीस“ग धेरै–धेरै बोलेको छु, एउटै कक्षाको साथी भएकोले मलाई लाग्छ तिमी पनि मलाई चिनिसकेकी छौं । तिम्रो हसिलो मुस्कानमा अल्झिन पनि थालेको छु । आ“खाहरू जुद्धा लजाउन पनि थालेको छु । तिमी छौ त ह्दय मेरो हलुको हुन थालेको छ ।
अब त ओठ मात्र मस“ग छ हा“सो तिमीस“ग,
मुटुमात्र मस“ग छ, धड्कन तिमीस“ग
चाहना छन् धेरै तर प्राप्ति तिमी एउटै
बा“धिएछु थाहै नपाई बन्धनमा तिमीस“ग कति छिट्टै
अब मेरो भागमा सबै छैन, आधा तिमीस“ग
मेरा अघि घुम्ति धेरै छन् प्राप्ती एउटै तिमी
दुःख सुख साट्न मिल्ने साथी एउटै तिमी
मुटु मात्रै मस“ग धड्कन तिमीस“ग
I want to say I love you Anji . I really love you
तर झुठ π सारा झुठ π सबै झुठ π म आफै झुठ रहेछु । मैले जे सोचे जे चाहे तिमीस“ग सब झुठो रहेछ । हो मैले सबै झुठो सोचेको रहेछु । म झुठो संसारमा पुगेछु । तिमी साह्रै असल छौं, तिमी साह्रै मायालु छौं । तिमी एउटी परी हौं, तिमी त म भन्दा लाखौ गुना जाती छौ । मलाई थाहा छ तिम्रा नयनमा धेरै सफा सपनाहरू छन् । ति सपनाहरू धेरै वास्तविक पनि छन् । तर म विवश छु, तिमीस“ग माफी माग्छु, दुई हात जोडी माफी माग्छु, तिमीस“ग उब्जिएको मायाको फेदभन्दा धेरै गहिराईसम्म मिलिमा स“गको मायाको फेद गडेको रहेछ । तिम्रो भन्दा पहिले ह्दयमा रोपिएको माया रहेछ उस“ग । अनि वास्तवमा हाम्रो माया कसैले उनीहरूको स्वार्थको लागि जिस्काउ“दा जिस्काउ“दै बसेको ख्याल ठट्टाको माया नै रहेछ । यसको मुहान एउटा ख्याल ठट्टा नै रहेछ । यो त बनावटी माया हो, माया त यो हो जसलाई ह्दयले पहिला रोज्यो, माया त यो हो जसलाई देखेर यो मुटु पहिला धड्कियो, आ“खाहरू निर्लज्ज भएर उसको सामु झुके, शिर झुक्यो, मन झुक्यो । ह्दयको पानामा उसको पहिला नाम कोरियो । तिम्रो र मेरो माया पनि एक अर्थमा हेर्ने हो भने मिलिमाको माया जस्तै नै अपरिपक्क छ । धेरै समानताहरू छन् पनि । म आप्mैमा बिबश छु म वास्तवमा मिलिमा बिना बा“च्ने कल्पना सम्म गर्दिन तर तिमी भन्छौ म बिना तिमी बाच्न सक्तिनौ । तिमी नरिसाउ तिमी कति पनि नबदलिउ, तिमीस“गको माया मिलिमाको माया भन्दा निकै काल्पनिक छ । हामी त साथी हौं धेरै नजिकको मात्र साथी । धेरै समय बिताइसकेका छौं हामी स“गस“गै । यसरी भावनात्मक भएर बग्नु हु“दैन हामी । तिमीलाई मेरो मनले कहिल्यै मिलिमाको ठा“उमा राख्न नसकेन पनि । मलाई छोडि दिऊ, मलाई पागल बन्न देउ, मलाई कत्ति पनि न रोक म उही ड्रिम गर्लस“गै डुब्न चाहन्छु, उस भित्र नै आफ्नो अस्तित्व लुकाउछु, आफ्नो एकोहोरो अनि एकतर्फी मायाको तान्द्राहरूले कल्पनाको महल बनाउछु, उसैस“ग माया गा“सिरहनेछु । जब मेरा सारा माया र ह्दय टुक्राटुक्रा भएर फिर्ता आउनेछ म आफै जलन र प्यालाको चित्तामा अन्तिम पटक लडिरहेको हुनेछु त्यतिबेला तिमी आइदिनु म अहिले नै निम्तो दिन्छु, तिमी त्यो दिन अवश्य आइदिनु मेरो ह्दयले चिर शान्ति पाउ“ने छ ।
बनावटी माया हो, माया त यो हो जसलाई ह्दयले पहिला रोज्यो, माया त यो हो जसलाई देखेर यो मुटु पहिला धड्कियो, आ“खाहरू निर्लज्ज भएर उसको सामु झुके, शिर झुक्यो, मन झुक्यो । ह्दयको पानामा उसको पहिला नाम कोरियो । तिम्रो र मेरो माया पनि एक अर्थमा हेर्ने हो भने मिलिमाको माया जस्तै नै अपरिपक्क छ । धेरै समानताहरू छन् पनि । म आप्mैमा बिबश छु म वास्तवमा मिलिमा बिना बा“च्ने कल्पना सम्म गर्दिन तर तिमी भन्छौ म बिना तिमी बाच्न सक्तिनौ । तिमी नरिसाउ तिमी कति पनि नबदलिउ, तिमीस“गको माया मिलिमाको माया भन्दा निकै काल्पनिक छ । हामी त साथी हौं धेरै नजिकको मात्र साथी । धेरै समय बिताइसकेका छौं हामी स“गस“गै । यसरी भावनात्मक भएर बग्नु हु“दैन हामी । तिमीलाई मेरो मनले कहिल्यै मिलिमाको ठा“उमा राख्न नसकेन पनि । मलाई छोडि दिऊ, मलाई पागल बन्न देउ, मलाई कत्ति पनि न रोक म उही ड्रिम गर्लस“गै डुब्न चाहन्छु, उस भित्र नै आफ्नो अस्तित्व लुकाउछु, आफ्नो एकोहोरो अनि एकतर्फी मायाको तान्द्राहरूले कल्पनाको महल बनाउछु, उसैस“ग माया गा“सिरहनेछु । जब मेरा सारा माया र ह्दय टुक्राटुक्रा भएर फिर्ता आउनेछ म आफै जलन र प्यालाको चित्तामा अन्तिम पटक लडिरहेको हुनेछु त्यतिबेला तिमी आइदिनु म अहिले नै निम्तो दिन्छु, तिमी त्यो दिन अवश्य आइदिनु मेरो ह्दयले चिर शान्ति पाउ“ने छ ।